Wararka Gudaha – Page 9 – Shabakadda Amiirnuur
Dhegeyso Shacabka puntland ‘sicir barar baa na saameeyay koofur baan u guureynaa iyadaa nolol roone”
Sicirir barbar soohdmiha dhaafay ayaa ka jira deeganada uu ka taliyo Maamul Gobaleedka Puntland waxaana jira qoysas ay u adag tahay in ay dabka shitaan. Maamulka Puntland ayaa dadka ka qaada canshuur badan taasuna waxay keentay in wax waliba ay qaaloobaan. qaarka mid ah haweenka ka ganacsada Qudaarta iyo Hilibka […]
Dhegeyso Roob dabeylo iyo kuleyl wata oo guryo dumiyay dadka qaarna suuxaan.
in badan labaatan guri ayaa dumay kadib markii markii shalay Roob dabeylo wata oo xoogan ka da’ay deegaanka Boos Hareeri oo hoos taga Degmada Aadan yabaal ee Gobalka Shabeelaha Dhexe. jiingangadaha qaar ee guryaha dumay ayaan weli dadku dib u arkin maadaama ay hawada u duuleen xiligii dabeyluhu socdeen. dadka […]
« Previous 1 … 7 8 9 10 11 … 255 Next »